शिकागोको नजिकै १० सबैभन्दा मनमोहक साना शहरहरू - यात्रा
शिकागोको नजिकै १० सबैभन्दा मनमोहक साना शहरहरू
10 Most Charming Small Towns Near Chicago
थाई खाना, मदिरा, सफा धुलाई not त्यहाँ त्यस्तो धेरै छैन तपाईं अपार्टमेंटमा यी दिन सिधा आदेश दिन सक्नुहुन्न। तर हुनसक्छ यो तपाईको फोनलाई तल राख्ने र एक साताको अन्त्यको लागि सरल जीवनको प्रयास गर्ने समय हो: ऐतिहासिक वास्तुकला, स्थानीय वाइनरीहरू र तालका दृश्यहरू यी चित्रमय साना सहरहरूमा शहरको तीन घण्टा भित्रै पछाडि फर्कनुहोस्।
सम्बन्धित: शिकागो मा लगातार खरीद गर्न Great ठूला ठाउँहरू
ल Long्ग ग्रोभको सौजन्य
१. लामो वृद्धि, इलिनोइस
सबैभन्दा पहिले (र शहरको नजिक) ल Long्ग ग्रोभ हो। शहर एक छ olde tyme यसको ऐतिहासिक कभर ब्रिज, कोब्बलस्टोन पदयात्रा र रंगीन क्लिपबोर्ड भवनहरूको लागि धन्यवाद महसुस गर्नुहोस्। तर जाने हाम्रो शीर्ष कारण यो हो वार्षिक स्ट्रबेरी फेस्ट जब सामूहिक पाई-खाने मात्र स्वीकृत हुँदैन, यो एक खेल हो। शिकागोबाट १ घण्टा
नयाँ भैंस अन्वेषण
२. नयाँ बुफलो, मिशिगन
हामी नयाँ दिउँसोको नरम, सुनौलो समुद्री किनारमा धेरै काम नगरी दिउँसो खर्च गर्न सक्दछौं। तर यदि तपाइँ व्यस्त रहन चाहानुहुन्छ भने, मिशिगन तालमा पानीको खेलबाट र पर्वतारोहणबाट त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् Galien नदी काउन्टी पार्क स्थानीय डिस्टिलरीहरू र भ्रमण गर्न चार हावा क्यासिनो । (केवल सम्झनुहोस्, तपाईंले शहर ढिलो छोड्नुभयो।) शिकागोबाट १ घण्टा १ minutes मिनेट
ग्रीन काउन्टी पर्यटन र वाणिज्य नयाँ बेलारस
NEW. नयाँ चमक, विस्कॉन्सिन
हामी शब्द प्रयोग गर्न सक्दैनौं गाउँ पर्याप्त, जुन हामी किन नयाँ गोरूस भ्रमण गर्न मन पराउछौं। यसको बभेरियाको संस्कृति र भवनहरूको साथ, यो शब्दको धेरै प्रतीक हो। अधिकतम पुरानो संसारको स्वादको लागि, शहरको अतुलनीय बियर र चीज प्रसाद नमूना। त्यहाँ नाम ब्रुअरी, यसको पंथ-स्थिति को साथ छ स्पट्टेड गाई ale, पुरस्कार-विजेता Alp र Dell creamery र मेरो क्राफ्ट शराब की भठ्ठी , देशको दोस्रो पुरानो शराब की भठ्ठी। २ घण्टा 45 45 मिनेट शिकागो बाट
K. KOHLER, WISCONSIN
कोहलर विस्कॉन्सिनमा एक ठाउँ छ जहाँ तपाईं सानो शहर आकर्षण र एकैचोटि पाँच-सितारा रिसोर्ट अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। शताब्दी पुरानो ट्यूडर पुनरुद्धार वातावरण अमेरिकी क्लब कम समय मा तपाईं whisk हुनेछ ... कम्तिमा तपाईं स्पा काटने एज एज हाइड्रोथेरापी उपचार कोशिस नगरे सम्म। कन्ट्रास्ट राख्नुहोस् रोमान्टिक घोडा तानिएको क्यारेज सवारीमा जाँदा, कोठा सेवा र तपाईंको सूटमा एक फिल्मको पछाडि। २ घण्टा minutes० मिनेट शिकागो बाट
Jeannine W. | शुद्ध मिशिगन
ST. ST जोसेफ, मिशिगन
यसको रातो र सेतो लाइटहाउस, पर्याप्त किनार र ईट सडकहरूसहित, सेन्ट जोसेफ मिडवेस्टको थोरै नानटकेट हो। तर शहर केवल एक जस्तो देखिने मनमोहक को लागी धन्यवाद को लागी भन्दा बढी हो चाँदी बीच , यसको ऐतिहासिक क्यारोसेलको साथ, पहुँच वारेन डन्स स्टेट पार्क र क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ वाइनरी को निकटता। शिकागोबाट १ घण्टा minutes० मिनेट
Galena भ्रमण गर्नुहोस्
A. गेलना, इलिनिस
गलेनाको भ्रमण तपाईले यात्रा गर्न सक्नुहुने निकटतम यात्रा हुन सक्छ: यसको ऐतिहासिक जिल्लाको करिब %०% भवनहरू ऐतिहासिक स्थानहरूको राष्ट्रिय रजिष्टरमा सूचीबद्ध छन्। तपाईं सजिलैसँग १ th औं शताब्दीको आर्किटेक्चरमा घुम्न र प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ, युलिसेस एस ग्रान्टको पूर्व गृह सहित। जब यो विश्रामको लागि समय आउँछ, शहरको धेरै स्वतन्त्र पसलहरू र रेस्टुरेन्टहरू मध्ये एउटामा जानुहोस्, जस्तो कि स्वाद लिने कोठामा Galena Cellars वाइनरी । शिकागोबाट hours घण्टा
ओटावा पर्यटक केन्द्र
O. OTTAWA, ILLINOIS
यदि तपाईं शिकागोमा बस्नुहुन्छ भने, चाँडै वा पछि तपाईं एक यात्रा लिनुहुनेछ भूकम्प रक राज्य पार्क । यसको चट्टानहरू र झरनाहरू अत्यन्तै रोमाञ्चक दृश्यहरू छन् यदि तपाईं शहरको समतल भागहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने। तपाईं त्यहाँ हुँदा, १inc मिनेट ड्राइभ गर्नुहोस् ओटावामा फोक्स र इलिनोइस नदी, ऐतिहासिक म्यानहरू र प्रतिमाहरू जसले पहिले लिंकन-डग्लस बहसको साइट चिह्नित गर्दछ। शिकागोबाट १ घण्टा minutes० मिनेट
M. खनिज पोइन्ट, विस्कनसिन
विस्कन्सिनको ड्राफ्टलेस क्षेत्रको हिस्साको रूपमा, खनिज पोइन्ट नाटकीय नदी उपत्यका र चट्टान ढाँचाहरू हेर्नको लागि उत्तम ठाउँ हो। तर यो एक फलफूल रचनात्मक समुदाय को घर पनि हो। यसको २ gal वटा ग्यालरी र स्टुडियोहरूको बीचमा घुम्दै, तपाईंले कुमाले, चित्रकारहरू, बुन्नेहरू, काठकर्मीहरू, गिलास कलाकारहरू, गहना निर्माताहरू र अधिक बढि भेट्नुहुनेछ। तपाईं एक प्रकारको टुक्राहरू किन्न सक्नुहुनेछ वा कक्षाको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईंको आफ्नै बनाउने भनेर जान्नको लागि। शिकागोबाट hours घण्टा
L। ELKHART LAKE, WISCONSIN
आराम गर्नुहोस् ... र त्यसपछि तपाईंको इञ्जिन पुन: विस्तार गर्नुहोस्? दुबै एल्खार्ट तालमा कार्डहरूमा धेरै छन्। निलो-हरियो ताल र यसको रिसोर्टहरू र B & Bs चिल आउट गर्न असंख्य तरिका प्रदान गर्दछ। तर शहरको इतिहास १ 50 s० को रोड रेसि ofको जन्मस्थल र यसको निरन्तर रेसि events घटनाहरूले आज एड्रेनालाईनको पनि प्रशस्त प्रस्ताव राख्छ। शिकागोबाट २ घण्टा minutes० मिनेट
१०. सेदरबर्ग, विस्कनसिन
१ 1876 to मा डेटि C, सेडरबर्गको कभर ब्रिज राज्यमा अन्तिम बाँकी एक हो। एकचोटि तपाईंले यसको अगाडि आवश्यक फोटो छोड्नुभयो, भ्रमण गर्नुहोस् देवदार क्रिक वाइनरी , सेदारबर्ग आर्ट संग्रहालय र विस्कॉन्सिन संग्रहालय Quilts र फाइबर कला को । यो भन्दा धेरै चिल प्राप्त गर्दैन। शिकागोबाट २ घण्टा
सम्बन्धित: तपाईंको २०१ 2019 शिकागो ग्रीष्मकालीन बाल्टी सूची
खुशीका फिल्महरू हेर्नका लागि
हेड र्याप कसरी प्रयोग गर्ने
कसरी जराबाट कपाल झर्न रोक्न
स्कुल बच्चाहरु को लागी प्रेरणादायक विचारहरु
सर्वश्रेष्ठ कामुक रोमान्स उपन्यास
लियो महिलाका लागि सबै भन्दा राम्रो अनुकूलता